TSY MIOVA NY FITAKIANTSIKA DIA NY FIVERENAN’I DADA , NY FAMOAHANA NY GADRA POLITIKA, NY FANOKAFANA NY RADIO NAKATONA – MyDago.com aime Madagascar
TSY MIOVA NY FITAKIANTSIKA DIA NY FIVERENAN’I DADA , NY FAMOAHANA NY GADRA POLITIKA, NY FANOKAFANA NY RADIO NAKATONA
Aleonay hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana androany teny amin’ny Magro Behoririka voan’ny lakrimozena teny Analakely toy izy ranomaso tao Ambohitsorohitra. Nanantena ny tsy ho tratry ny aloka ry zalahy kanefa tratra ihany. Raha niroso amin’ny fivoriambe ny vondrona afrika hoy izy dia azo eritreretina tsar a ny mahakasika an’I Madagasikara dia ny fampihavanana. Amiko hoy izy rah any filoha Ravalomanana dia izy no tokony hahazo ny loka momba ny fampihavanana satria niala moramora izy tamin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Raha namporisika antsika izy hoe alefaso amin’izay dia agamba tsy hita noanoa ny zavatra nitranga teto fa hoy izy hoe aoka aloha. Iny rangahy iny hoy Mamy Tiana dia faly lalandava ary tsy mampiditra antsika anaty lavaka fa mamporisika antsika amin’ny fampihavanana. Olona tia fihavanana izy ka ilaina ary tsy misy vahaolana afatsy ny fahatongavany eto.
Momba ny fandaminana ny tolona anatiny dia nambarany fa misy mieritreritra hafahafa any ambadika any izay mitady ifindra lasy ireo fikambanana sasany. Tsy hifanomezantsiny izany hoy izy fa tsofina rano izay te handeha, fa ny mijanona eto kosa dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana, ny famohanana ny Gadra politika, ny fanokafana ny radio nakatona izay no tanjontsika. Na taiza na taiza hoy izy nalehantsika , na nanohana olona dia io foana ny fitakiantsika.
Momba ny resaka mpanohitra dia nilaza izy fa mandram-pitsangan’ny governemanta dia mpanohitra isika. Eto isika hoy Mamy Tiana dia mametraka tsara fa hatramin’izao dia mijoro ho mpanohitra fa mbola misy zavatra tsy tanteraka. Ampiana tafika Magro hoy izy tsy ampiana tafika. Raha misy any namana milaz afa hampody an’I dada, fa isika hoy izy teny Ambohijatovo , na taiza nataiza dia izay foana. Noho izany dia tsy mijanona isika fa eto foana ary tsy maintsy faranana ny tolona. Ankoatra izay dia nambarany fa misy mampiditra virus ato amintsika mpitolona , mety manjono , mety mitondra zavatra hafahafa ato. Rehefa mivaona amin’ireo zavatra telo ireo hoy izy dia teneno izy hivoaka ato fa raha mitovy fijery amintsika dia ampandrosoy. Noho izany hoy izy dia mitandrema isika.
Sazalahy Tsianihy kosa dia nanambara fa tsy mety raha tsy misy mpanao politika miresaka eto an-kianja satria tsy mbola tong any filoha Ravalomanana. Rah any herintsika rehetra fotsiny hoy izy , raha tsy tao anatintsika ny fanantenana dia efa tsy teto isika rehetra fa noho ny herin’Andriamanitra dia mahazo hery isika. Raha ny zavatra nitranga tao anatin’ny telo andro hoy izy dia tsy noeritreretina mihitsy. Misy olona mieritreritra fa azy ny tany sy ny firenena. Ny fanalana ny dst, fis dia tena mangatsiaka ireo ary tsy hitany ny asiana ny tongony satria ilay fahefana eo am-pelantanany dia hanaovany izay tiany atao fa nesorina taminy ilayfahefana ka tsy te hijery olona intsony. Zakao hoy Tsianihy ilay izy fa izay no fahefana avy amin’Andriamanitra, mbola lavalava toy izay no ho avy.
Mandeha ny adihevitra hoy izy amin’izoa fotoana izao ary tsy ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana intsony izany fa ny hoe raha tonga eto izy dia asiana fepetra sa tsia. Rehefa tonga eto izy dia tsy hanao politika hoy ny sasany, na mikarakara ny Tiko, na ny Fjkm. Ny hafa indray milaza fa avelao izy ho hody fa tsy avela manao politika sao manelingelina ny sasany. Tsy ho ela hoy izy dia ho tonga I dada ary miomana isika. Ireo nanenjiaka antsika dia manenina amin’izao fotaona izao, satria raha navela hiditra teto izy dia afaka nifaninana tamin’ny sasany. Aoka isika eto hoy izy no hita taratra amin’ny fampihavanana satria misy adidy ho antsika dia ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana.
Ravatomanga Rolland : « mitaky ny famoahana ireo gadra politika rehetra tsy misy fepetra . »
Tsy miova ny fitiavanay an’i Dada hoy Leriva Manahirana
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 janvier 2014 30 janvier 2014 Catégories Politique
9 pensées sur “TSY MIOVA NY FITAKIANTSIKA DIA NY FIVERENAN’I DADA , NY FAMOAHANA NY GADRA POLITIKA, NY FANOKAFANA NY RADIO NAKATONA”
ahhhh ! Efa mba hoe : FITAKIANA fa tsy FANGATAHANA intsony : Fiovana izany ka !
Fa an-koatry ny fahatongavan’i Dada , Mikofoka ho PM hono Ra-Domelina ?
Resaka C.E.S indray ity , ka ho HALA-BATO VAOVAO sa HERY VAOVAO ?
Dadanay iny fa tsy dadan’ialah!!lasa tanalahy indray sa tarondro izato izy??
Azafady fa tsy azoko tsara hoe: nofoanana ny DST sy ny FIS???de makaiza ireo olona ireo??
ireny no tena mpampioro2 tao @ tanana tao mantsy.
31 janvier 2014 à 6 h 09 min
Raha ny fizotran’ny toe-draharaha @ zao fotoana izao dia tsy ialina takiana akory ireo fa raha vao tafapetraka ny structure légale dia azo ireo.
31 janvier 2014 à 6 h 26 min
Urgent : Lalao Ravalomanana est rentrée en Afrique du sud
zavatra tsy possible hoa zany A/toa Andry ho PM zany resaka fisontonana lakolosy izany
Satria tsy antoko ny MAPAR fa mitovy @ indepandant rehetra fa ny mouvance no antoko,nefa ny politika frantsay ihany koa tsy manaiky PM plateau zany,mitohy ny ANALYSE….
aleko mikombona ….sao dia latsaka eto ny ompa isan-karazany !
31 janvier 2014 à 10 h 33 min
fanehoan-kevitra ne miainga eto ry GDB e!
Shhhh !! Aza mba mahasosotsa !
Aza akombona ary mba velaro rehefa kitihina sy safoin’olona, fa aza dia mody saro-kenatra tahak’io ê ! Sa dia ho atao hoe Marie-honte na Mimosa (fausse) pudica indray ity pseudo ?
Vonyfanja dit :
31 janvier 2014 à 11 h 44 min
marina io ny mapar tsy antoko raha tsy hoe ovaina indray angaha ny lalana ! fa mety tsy sahy hanao izany ry zareo fa lasa tsy mahazo famatsiam-bola eo indray atao saosy vaovao e!
Précédent Article précédent : EFA AKAIKY NY FAHATONGAVAN’I DADA, NY FOMBAFOMBA SISA NO ANDRASANA
Suivant Article suivant : FIHAONANA TANY ADDIS ABEBA : ATOMOTRA NY FODIAN’I DADA